December 6, 2019 - Update New
အချိန် ၂ နှစ်အတွင်းမှာ ပိန်ညောင်ရိုး ဘဝနေ လုံးဝ ပြောင်းလဲ ပြစ်လိုက်တဲ့ မိန်းကလေး
December 6, 2019 Naing 0
အချိန် ၂ နှစ်အတွင်းမှာ ပိန်ညောင်ရိုး ဘဝနေ လုံးဝ ပြောင်းလဲ ပြစ်လိုက်တဲ့ မိန်းကလေး ခေတ်မီတိုးတက်လှတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ မိန်းကလေးအများစုရဲ့ ရည်မှန်းချက်ဟာ ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်လေးနဲ့ စတိုင်လ်ရှိရှိလှနေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ အရမ်းပိန်တဲ့သူတွေကို လည်း ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ သူတို့ကရော လှတယ်လို့ […]
တရုတ်နိုင်ငံမှာ မြန်မာ့ သမီးပျိုလေးတွေကို ဘာကြောင့် ဈေးကောင်းပေး ဝယ်ယူနေကြသလဲ? ဆိုတာ( video )
တရုတ်နိုင်ငံမှာ မြန်မာ့ သမီးပျိုလေးတွေကို ဘာကြောင့် ဈေးကောင်းပေး ဝယ်ယူနေကြသလဲ? ဆိုတာ “လူသည် ရောင်းကုန် မဟုတ်ပါ” စစ်ကိုင်း၊ ဒီဇင်ဘာ(၆)၊ AlinnMyay(အလင်းမြေ) လူကုန်ကူးမှု အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲနှင့် အသိပညာပေး လက်ကမ်းစာစောင်တွေဖြန့်ဝေပေးတဲ့ ကမ်ပိန်းပြုလုပ် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မင်းကွန်းတိုက်နယ်၊ မင်းကွန်းဒေသနှင့် ကင်းကျေးရွာတို့မှာ တရုတ်နိုင်ငံသို့ လူသုံးဦးထက်မနည်း […]
မလေးရှားမြေမှာ အောင်ပွဲခံပြီး အိမ်ကွင်း၊ အဝေးကွင်း မရွေးကြောင်း ပြလိုက်တဲ့ တီရဲလ်ထန် (video file)
မလေးရှားမြေမှာ အောင်ပွဲခံပြီး အိမ်ကွင်း၊ အဝေးကွင်း မရွေးကြောင်း ပြလိုက်တဲ့ တီရဲလ်ထန် ချင်း အမျိုးသား တီရဲလ်ထန် အနေနဲ့ မွေးရပ်မြေ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြင်ပမှာ ပထမဆုံး အကြိမ် သိုင်းပေါင်းစုံ MMA ပြိုင်ပွဲကို ကွာလမ်လာပူမှာ ဒီညနေ ထိုးသတ်ခဲ့ရာ ကိုရီးယားပြိုင်ဘက် ကင်မ်ကို ဒိုင်လူကြီး […]
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဇနီး အပေါ် ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုကြောင့် ကမ္ဘာကျော်သွားတဲ့ ( video file)
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဇနီး အပေါ် ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုကြောင့် ကမ္ဘာကျော်သွားတဲ့ ( video file) ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ချစ်မိရင် အစစ အရာရာ ဂရုတစိုက် ရှိနေပေးတတ်သလို၊ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကလည်း အပြန်အလန် ဂရုတစိုက်နဲ့ အလေးပေးနေတတ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေဟာ ချစ်သူယောက်ျားက ဂရုစိုက်ပေးတာလေးကို သာယာကြပါတယ်။ […]
လက်တို့ပြီးတော့မှ ​ပြောချင်သူတွေ သတိထား “တို့ဆေး”
လက်တို့ပြီးတော့မှ ​ပြောချင်သူတွေ သတိထား “တို့ဆေး” ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ” အစ်မ..အစ်မ..” အမျိုးသမီးက လှည့်ကြည့်ပြီး ” အမလေးး” ” ဟင်…ဘာလဲ? ” ” အမလေး..ကယ်ကြပါအုံး..သူ.. သူ..ကျမကို တို့လိုက်ပြီ ” ” ဟာ..” သောက်ပြသနာတော့ တက်ပြီဟ.. ” ဟာ..မဟုတ်ဘူး အစ်မ […]
တကိုယ်​လုံးချွတ်​ထားတဲ့ပုံ အပြန်​အလှန်​ပို့ကြရင်း ဘ၀ပျက်ခဲ့ရတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့အဖြစ် အိမ်​​ထောင်​သည်​ မိန်းက​​လေးများ အထူးသတိပြုရန် အထူးသဖြင့်​ အိမ်​​ထောင်​သည်​မိန်းက​​လေးများကို ရည်​ညွှ​န်းပါသည်​​ မနေ့ည​နေက ကျ​နော်​ထမင်းချက်​​နေတုန်းက cbက​နေ မိ​န်းက​လေးတ​ယောက်​ တုန်​တုန်​ရီရီနဲ့ အကူအညီ လာ​တောင်းတာကို ထိ​ရောက်​တဲ့ အကူအညီ​ပေးယင်းနဲ့ သတိရလို့ ဒီpost ကိုတင်​လိုက်​မိတာပါ ခုအဖြစ်​အပျက်​က တကယ့်​အဖြစ်​မှန်​ပါ ခံလိုက်​ရတဲ့ […]
မှောက်လျက်အနေအထားဖြင့် သေဆုံးနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ကလေးငယ်တစ်ဦး အလောင်းတွေ့ရှိ
မှောက်လျက်အနေအထားဖြင့် သေဆုံးနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ကလေးငယ်တစ်ဦး အလောင်းတွေ့ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ကလေးငယ်တစ်ဦး ဦးခေါင်းနောက်စေ့ ကြေမွဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးလျက် တွေ့ရှိ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဘုတလင်မြို့နယ်၊ လွှဲတဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မြောက်တောကြီးကျေးရွာအနီး ညောင်ပင်ကြီးတောတိုက်ရှိ ကွမ်းခြံအတွင်း၌ ဒီဇင်ဘာလ(၅)ရက်၊ နေ့လယ်(၂)နာရီအချိန်ခန့်က အမျိုးသမီး တစ်ဦးနှင့် ကလေးငယ်တစ်ဦး ဦးခေါင်းနောက်စေ့ ကြေမွဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးလျက် […]
ဆီးဂိမ်းစ် ဘိလိယက် နှစ်ယောက်တွဲပြိုင်ပွဲတွင် စင်ကာပူကိုအနိုင်ယူပြီး မြန်မာရွှေတံဆိပ်ရ
ဆီးဂိမ်းစ် ဘိလိယက် နှစ်ယောက်တွဲပြိုင်ပွဲတွင် စင်ကာပူကိုအနိုင်ယူပြီး မြန်မာရွှေတံဆိပ်ရ ဖိလစ်ပိုင်မှာ ကျင်းပနေတဲ့ အကြိမ် ၃၀ မြောက် ဆီးဂိမ်းစ်ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဒုတိယမြောက် ရွှေတံဆိပ်ဆုကို ဘိလိယက်အားကစားနည်းကနေ ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။ မနေ့က ကျင်းပတဲ့ ဘိလိယက် 9ball Pool ဗိုလ်လုပွဲမှာ အောင်မိုးသူ၊ ဖုန်းမြင့်ကျော်တို့အတွဲက လက်ရှိချန်ပီယံ […]
ညီမလိုမဖြစ်ဖို့ မျက်ကပ်မှန် မတပ်ကြဖို့ စေတနာ နှင့် ရေးတဲ့စာ
ညီမလိုမဖြစ်ဖို့ မျက်ကပ်မှန် မတပ်ကြဖို့ စေတနာ နှင့် ရေးတဲ့စာ ညီမလို မဖြစ်ဖို့ စေတနာဖြင့် အရမ်းလှ ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် နောင်တတွေရခဲ့ပါပီ မျက်ကပ်မှန်တပ်ရင် မျက်လုံးလေးက ပိုဝိုင်းပီး လှသွားသလောက် ရလာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကလဲ အံ့မခန်းပါပဲ မျက်ကပ်မှန်တပ်ပီး နေပူထဲ အကာမပါသွားခဲ့တယ် မနက် ၉ နာရီကနေ ည […]
Big Boss ရေသန့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသည့် ပဲခူးမြို့ခံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးဝင်းထွဋ် အသတ်ခံရ ( ရုပ် သံ )
Big Boss ရေသန့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသည့် ပဲခူးမြို့ခံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးဝင်းထွဋ် အသတ်ခံရ ( ရုပ် သံ ) ပဲခူး ဒီဇင်ဘာ ၆ ။ Big Boss ရေသန့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသည် ပဲခူးမြို့ခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးဝင်းထွဋ်သည် ယမန်နေ့က၎င်းပိုင်ဆိုင်သည့် အင်းတကော်ခြံတွင်အသတ်ခံရသည်ဟု ကနဦးသတင်းရရှိသည်။ သတ်ပြီးမြေမြုပ်သွားတာအင်းတကော်ဘက်မှာ အခုသွားဖော်ဖို့စိစဉ်နေတယ်မှုးခင်းဆရာဝင်လဲပါတယ်ဟ […]